Top 7 Free-adda u Android Apps in Download
Ammaanka System Android
Sida aan ognahay Android ku salaysan yahay nidaamka ka hawlgala Linux oo ka mid ah arrimaha amaan isku mid ah. Aniga fikirkeyga, nidaamka Android ay u badan tahay in aad loo dhawro halkii aan xaqiijisatay. Sababta oo ah in ay tahay in muhimka ah ee nidaamka Android laftiisa heshay in hab sax ah, laakiin user ogolaan karo barnaamijyo xaasidnimo ah in wax la yeelo qalab aad. Nidaamka Android leedahay wax badan oo lakab si loo sugo qalab aad ka socda codsiyada "xun". First of dhan, waxaa la doorbidayaa waa si loo soo dajiyo barnaamij ka dukaanka Google Play. Waa dhacdaa, sababta oo ah Google Play waa ilaha aad ku kalsoon tahay ee Chine oo ay tahay fursad aad u yar in ay kala soo bixi barnaamijka xaasidnimo ka Google Play.
Haddii kale, haddii aad soo dajiyo codsiyada ilo undefined waxaad yeelan doontaa fariin digniin ah, kaas oo sheegay in "Man, halka uu app waa undefined, ma waxaad dhab ahaan doonayaan si loo soo dajiyo app this?" Waa tallaabo hore ee Android nidaamka ammaan ah in qalab ka aamin app undefined. Tallaabada labaad waa xaqiijinta xuquuqda, in app weydiiyo ay shaqada ku haboon. Bal aan qiyaasi xaaladda: app virus weydiiyo user si uu u siiyo ogolaanshaha xidid nidaamka, user u sameeyaan oo ay dhacdo in this antivirus ma badbaadin doonto iyo habka ka fayraska.
Sidaas sida aynu xukumi karo kor ku xusan - Android waa nidaam aad u nabdoon, laakiin user keeni karaan wax badan oo ka mid ah waxyeelo, waxa uu, haddii ay ku siinaysaa kartida aad u badan si ay barnaamijyadooda ka shakiyaan.
Antiviruses on Android: Isticmaalka ama inaan la siin?
Maanta dad badan u isticmaalaan antiviruses in ay nolol maalmeedka. Waxaad iyaga ku ogaan kartaa kombiyuutarka desktop aad saaxiib ayaa, shaqada ama combiyuutarka ee kooxaha kombiyuutarka. Laakiin waxa ku saabsan antiviruses aad telefoonada smart iyo kiniiniyada. Ma u baahan tahay waxaan iyaga ka fayrusyada iyo barnaamijyo kale oo waxyeello u ilaaliyaan? Ma waxaan u baahannahay rakibi antiviruses on hindisooyinkayaga Android? Si aad su'aashaas ka jawaabo waxaan bilaabay inaan maqaalkaan qoro. Ma dhihi karo cad oo ku saabsan su'aalaha kuwa sababta oo ah waxa uu leeyahay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka sidoo. Advantage ee antiviruses waa in ay u heshaan karo, kuna wargeliyo user ku saabsan fayrusyada iyo barnaamijyo kale oo laga shakiyo. Laakiin halkan waxaan aad u arki karto khasaaro ugu weyn - antiviruses Android ma tirtiri kartaa Chine, kuwaas oo si toos ah. User waa in ay tirtirto waxaa gacanta la adeegsanayo dhisay-in qalabka Android saaray software. Antiviruses iskaan karaa threads nidaamka, ka saar xayeysiis barnaamijyada, iyo digaynaa barnaamijyadooda taas oon laga yaabin inay ordi qalab aad. Sidoo kale haddii aad u rakibi on jir telefoonada smart, aad hoos u dhigi doontaa xawaaraha nidaamka, sababtoo ah antiviruses cuni doonaa ilaha oo dhan. Anigu ma aan helay wax barnaamijyada antiviruses on my telefoonka mobile hadda iyo wax xun ayaa weli ku dhacay.
Laakiin haddii aad rabto inaad kala soo baxdo iyo rakibi barnaamijyo lacag la'aan ah oo laga shakiyo waxaan ku talinaynaa in aad si loo soo dajiyo antiviruses ku saabsan telefoonka. Sababta oo ah in badan oo ka mid ah software xaasidnimo ah hadda iyo haddii qofku aanu ku kalsoonayn isha app ka soo dejisan ama aad leedahay in ka badan sababo in aad iska baarto - isticmaalka antiviruses. Waxay yihiin fudud si ay u fahmaan oo si sahlan loo isticmaali qof kasta. Sidoo kale haddii aad leedahay qalab cusub la soo dhaafay teknoolajiyada dhisay-- Uma maleynayo antiviruses hoos u dhigi doono telefoonka gacanta.
Top 5 Android Free adda Apps u dajinta
Sidaas darteed haddii aad dhabtii doonaysid si loo soo dajiyo antivirus lacag la'aan ah oo ku saabsan telefoonka mobile ka dib markii this article gaaban, waxaan idin siin doonaa liiska 5 antiviruses free sare ee Android. Halkan waa:
Avast Mobile Security & Adda 2,6 MB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity 5/5
Kaspersky Internet Security 23 MBV free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms.free 5/5
Norton Ammaanka iyo Adda 2,3 MB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symantec.mobilesecurity 3/5
Avg antivirus Security 6,3 MB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus&hl=en 5/5
Avast Mobile Security & Adda
Codsiga Great haddii aad ka war ku saabsan badbaadada telefoonka aad. Interface Simple ka shaqeynayaan weyn. Waxay leedahay jiray cayn kasta oo qalabka waxtar leh si aad u ilaaliso phone smart. First of dhan, sida barnaamijka antivirus walba "avast Mobile Security & Adda" ayaa "Scanner Virus" qalab adeeg oo iskaan fayrusyada aad telefoon. Sidoo kale antivirus ah "waa koobay" telefoonka kula Brannmur iyo Web Shield in la sameeyo web aad fankooda aan dhib lahayn. Laakiin waxaa jira hawlaha kale kuwaas oo ku kala duwan yihiin antivirus ka walaalkiis ka weyn - desktop antivirus avast. "Avast Mobile Security & Adda" u ogolaanaya in ay socdaan dhaqanka ee Chine lagu rakibay (Management Application), dan oo ku saabsan arimaha gaarka ah ee aad taleefan (Privacy taliyaha) iyo qalab Anti-Xatooyo.
Walaalkiis yar oo si fiican u yaqaan "Kaspersky Internet Security" u desktops. Waxay leedahay minimalism in design, laakiin shaqeynta adag. Laga soo bilaabo shaashadda weyn ee aad bilaabi kartaa scan nidaam, taas oo ay kormeeraan dhammaan qaybaha ee aad telefoonka iyo ku siinayaa natiijada ugu saxda ah. Haddii aad rabto in aad kala soo bixi barnaamijyadooda qaar ka mid ah, "Kaspersky Internet Security" aad ku talin doonaa kuwa yar ee qaybta "Apps". Sidoo kale waxa ay leedahay "Browser" feature, Call & Text Filter iyo qalab Auto-Xatooyo. Oo lagu daray ugu weyn ee antivirus tani waa macluumaad badan, kuwaas oo "Kaspersky Internet Security" ay muujinaysaa in ay user. Tusaale ahaan, ka dib markii baaritaan lagu guulaystay waxaan ogaaday in aan qabo arrimaha xun qaar ka mid ah ee nidaamka ammaanka my - dhibaatooyin la xiriira nidaamka qalliinka. Sidaas darteed haddii aad heysato dhibaato ah, app this heli doonaa halka uu dhibaato this.
Antivirus Tani runtii dan ku saabsan sharciga. On la bilaabay marka hore aad arki doonaan "Heshiiska License User" button xaqiijin. Haddii aad rabto in aad ka akhriyi mid, barnaamijyada sidoo kale ku siin doonaa xiriir ah in ay heshiiska. Oo weliba waxaan ahaa niyad ay shaqeynayaan oo lacag la'aan ah. Version A lite ee app ah uu leeyahay oo kaliya qalab Anti-Xatooyada iyo Anti-furin. Iyo iyadoo jidka ag fadhida, in version free jiro SMS kaliya Anti-Xatooyo la heli karo. Version Web ee Anti-Xatooyo socoto nooca buuxda. Full Version ku siin doonaa "Wac & SMS xanibeen" iyo "badbaado Web". Sidaas darteed haddii aad heysato version ah oo lacag la'aan ah ka war spam SMS iyo xayaysiisyada,)
Sida aan ku xukumi karaa qadarka downloads on Google Play - waa ka antivirus ugu caansan ee telefoonada smart hadda. Oo anigu waxaan qabaa in ay jiraan sababo badan ee ay sidaa u noqon. First of dhan waxa ay leedahay design fudud. Mid labaad waa set weyn oo qalabka ammaanka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u bilaabaan baaritaan nidaam, scan file, scan file qoto dheer, scan la PUP Ogaanshaha, waxaad sameyn kartaa Scan Auto ah ama sii eegay a Web Safe. Sidoo kale Avg dan oo ku saabsan waxqabadka aad telefoon iyo gaarka ah. Waxay kuu sheegi karaa isticmaalka xogta aad hadda oo aad telefoonka ka ammaan iyo tuuganimada leh qalab Anti-Xatooyo.
Aniga design ee app antivirus tani waa mid laga cabsado. Oo lagu daray The badan ee app tani waa shaqeynayaan weyn. Tusaale ahaan waxa ay leedahay laba cayn kasta oo baaritaano virus - Simple iyo Full; Wac & SMS Joojinta feature waxaa laga heli karaa version iyo Xiriirada kaabta xorta ah dan oo ku saabsan xiriirada aad. Marka laga reebo hawlaha antivirus heerka app leedahay wax badan oo ka mid ah muuqaalada dheeraad ah si loo gaarsiiyo dhaqanka telefoonka aad. Waxay leedahay Coobbi Phone, Memory buusterka, Manager App iyo App Box. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad si loo dedejiyo telefoonka - guji icon Memory xoojinta iyo natiijada aad ka heli doonaa. Ama guji uun on "Hubin" badhanka si ay u kormeeraan dhammaan qaybaha xun ee aad telefoonka - khasnado prom la xiriirta dhibaato dhanka gaarka ah.
> Resource > Android > Top 5 Free-adda u Android Apps in Download